Foursquare City Guide အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
11.19.1 for Android
၏ဖော်ပြချက် Foursquare City Guide
FoTsquare City Guide သည်သင့်အားကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအကောင်းဆုံးသောအစက်အပြောက်သို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းမှအထောက်အကူပြု။ အပြုသဘောဆောင်သောအကြံဥာဏ်များကိုရယူပါ။ အားလုံးတစ်နေရာတည်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ညီမအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
City လမ်းညွှန်ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် -
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိတကယ့်လူမျိုးများရေးသားသောအကြံပြုချက်များကိုဖတ်ပါ။ ( အညိုရောင် rants
hyper-and peterned အကြံပြုချက်များကိုရယူရန်
> သူငယ်ချင်းများ, အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လိုက်နာပါ သြဇာလွှမ်းမိုးသော
သည် Mene-menu items letters, wifi passwords များနှင့်အခြားသမိုင်းကြောင်းနှင့်အခြားသမိုင်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံမှုများကိုဖော်ထုတ်ပါ။
Rome သို့သွားစဉ်သင်သွားစဉ်သင်သွားစဉ်သင်သွားစဉ်သင်သွားစဉ်သင်သွားစဉ်သွားလာရင်းသင်သွားသောနေစဉ် memory memory memory ကိုအမှတ်အသားမမှတ်မိပါနှင့်။
ဘက်ထရီကိုမှတ်စုရေးထားတာပါ Foursquare City Guide ကိုစွမ်းအင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်တည်နေရာနည်းပညာသည်၎င်းကိုအလွန်အမင်းစွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေသည်။ သို့သော်ဤအမျိုးအစားအက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးနှင့်အတူဘက်ထရီသက်တမ်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် GPS ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေနိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု. မှတ်သားပါ။
ဘာအသစ်လဲ Foursquare City Guide 11.19.1
FOURSQUARE TV || AGATATU SERVICE WITH BISHOP KAREGEYA - 27.10.2021